Ukwakhiwa kweMichiza kunye neoyile neGesi | Tianjin Yixin Pipe Izixhobo Co., Ltd.
Ukusebenzisana ixesha elide kunye ne-CNCEC kunye neSinopec
Iminyaka eli-12 R & D, YIXIN oomatshini iwelding oluzenzekelayo ziye zisetyenziswa ngokubanzi kwaye badumisa kakhulu CNCEC kunye Sinopec. Phakathi kwabo, ulwakhiwo lweekhemikhali lwe-13, ulwakhiwo lweekhemikhali lwe-16, ulwakhiwo lweekhemikhali lwesi-6 kunye nezinye iinkampani ezininzi ezamkele umatshini wombhobho wokuzenzekelayo we-YXIN kwiibhetshi zeemeko zomsebenzi wasekhaya nakwamanye amazwe kwisiza. Ingxelo yabathengi yokuba umatshini we-welding we-YIXIN uphatheka ngokulula kwaye ulula, unentsebenzo egqwesileyo,, imilo entle yokuwelda kunye nereyithi ephezulu yokuwelda komthungo, okonga kakhulu iindleko zabasebenzi kunye nokuphucula ukusebenza kwemveliso.
I-HW-ZD-200 isetyenzisiwe kumzi mveliso weoyile kunye negesi
I-HW-ZD-200, eyilelwe i-oyile kunye negesi yokuhambisa imibhobho, iphumelele impumelelo enkulu kwindawo yayo.
I-Tianjin Bomec Offshore Engineering Engineering Co., Ltd. yinkxaso-mali ye-Bomec Offshore Engineering Co., Ltd. Isebenza ikakhulu kuyilo kunye nokudityaniswa kolwakhiwo lweemodyuli ezahlukeneyo, ikakhulu i-oli nonxweme kunye nobunjineli begesi, izityalo zegesi yendalo kunye imigodi. Inkampani yadweliswa kwintengiso ye-A-share ngo-2016 kwaye yomelele. Le projekthi yamkela indlela yokubhida evulekileyo, kwaye zizonke iinkampani ezi-5 ezithathe inxaxheba (inkampani eShanghai, inkampani eseShandong, inkampani eseGuangzhou, kunye nenkampani eZhejiang). Ngexesha lenkqubo yokubhida, izixhobo zabanikezeli ngeenkonzo ezahlukeneyo zenze ukhuphiswano lwewelding kwindawo.
Umthengi uphonononge ngokungqongqo ukusebenza komatshini, ukusebenza kakuhle kwe-welding, ukuyila, inqanaba lokuphumelela kwesiphene kunye nezinye izikhombisi. Ekugqibeleni, izixhobo ze-YX-150 zenkampani yethu ziphume zaza zaphumelela ibhidi yale projekthi. Ngokusebenzisana neBomec Offshore Engineering, iprojekthi yathengwa ngeebhetshi. Ukuza kuthi ga ngoku, ixabiso lokuthenga lilonke limalunga neeseti ezingama-20.